God Archives — Trip LEE - YEPAMUTEMO SARUDZA
Mwari Mwari Mwari Mwari Mwari Mwari Mwari Mwari Mwari Mwari Mwari Mwari Mwari Mwari
Uyu pfupi mashoko kubva Advance College Conference muna Raleigh, NC. Unogona kuverenga zvinyorwa pazasi:
Ndinoda kutaura nemi kwenguva pfupi kwazvo pamusoro kushandisa zvipo zvedu nokuda kubwinya kwaJesu.
Wati wambonzwa vana mibvunzo? Vane chinoshamisa kuziva kuti zvinoita sokuti haatongogumi. Kuti magic mubvunzo “sei” vanogona kuenda mberi kwemaawa uye maawa. Ndine shamwari ndiani vana vari Danho iri iye zvino. Zvakanaka zvinoita sokuti pane mwana muduku ari mweya wangu kuti anoda kubvunza nei, asi hazvisi nezvemibvunzo Abstract, zviri nezvoupenyu zvinhu.
Handisi chaizvo nyore anokurudzirwa. Kune vamwe vanhu vari ndezvomuzvarirwo rwakadzokera, uye chokwadi chokuti chinhu anofanira kuti kuitwa ndiyo vavariro vakwane. Mudzimai wangu mumwe wevanhu ivavo; handisi.
Kuti ini kuwana chinhu nokuita, Ndinoda pfungwa kuti ndiri kuita chimwe chinhu chikuru. "Asi kana ini tora tsvina ichi kubva, achaita awane tsvina murume akaponesa?"Ndiri tanidzwa mukomana, uye ndiri kashoma vanokwezvwa mashoko kana richikunetesa mabasa. Zvinosuruvarisa, mashoko uye richikunetesa mabasa ndivo vakawanda upenyu chaihwo. Zvimwe ndosaka Ndakamborwisa…
Heunoi mharidzo Ini akaparidza vachangobva pamusoro Pisarema 95:10-11. My 3 pfungwa vaive:
II. Chivi chiri Alernate Path
Ndinonamata ichi chinhu kurudziro kwamuri
Haufaniri kutsausa neni. In Exodus 17, vaIsraeri kuedza Mwari nokuita sokunge vasingagoni vanomutenda. Mushure zvose zvaAkaita kwavari, akavayera vanhu vake, achivanunura kubva muuranda, uchivatarisira uye zvichingodaro, vachiri regai vanomutenda. Saka ivo vakarwa…
Trip Lee Hakusi Robot kubva vachishuva Mwari pamusoro Vimeo.
Panguva paakabvunzurudzwa munguva ichangopfuura, vachishuva Mwari Akandibvunza kutaura zvishoma pamusoro rwiyo rwangu, robhoti kubva The Life Good
The Gospel mu 2 maminitsi
Chii Chinonzi Evhangeri? kubva vachishuva Mwari pamusoro Vimeo.
Imwe vhidhiyo kubva hurukuro yangu vachishuva Mwari. Ivo neni akabvunza kana ndaigona Rap Vhangeri 2 maminitsi. Ichi chaiva kuedza kwangu
Wati ndaramba Mwari Universe? Zvitende kana kwete, ichi chinokosha mubvunzo kuti tose kufunga. Zviri pachena muMagwaro kuti upenyu husingaperi akupa vaya vanovimba Mwari uye kutenda Good Yake News, uye kwakarurama rinoitwa pasi vaya vanoramba naye. Asi pane zvinopfuura imwe nzira kuramba Mwari. Heano vatatu kuti ndakawana muTestamende Itsva.
1. Vachiramba kuti Jesu ndiani Akati Akanga
“Ndianiko murevi wenhema asi iye anoramba kuti Jesu ndiye Kristu? Kuti ndiye munhu anopesana naKristu, anoramba Baba noMwanakomana. Hakuna munhu anoramba Mwanakomana angava naBaba. Ani naani anopupura Mwanakomana una Babawo.”
Kune vanhu vazhinji munyika yedu nhasi vanoda vanofunga zvomudzimu kana chitendero vanhu. Vanodavira kuti Mwari ariko, uye vanoedza kumunamata munzira yavo pachavo. Pamwe ivo kunyange kumuona somudzidzisi chikuru kana muporofita naMwari. Asi kana havatendi kuti Jesu ndiye Akati Ndiye, vari paakamuramba.